Manchester United oo liiska xiddigaha ay suuqa ka doonayso ku darsatay laacib ka tirsan Kooxda Wolves – Gool FM
Saddexda kooxood ee midkood uu ku biiri doono daafaca Chelsea ee Antonio Rudiger oo daaha laga rogay
Kooxda Barcelona oo go’aasatay inay iska iibiso Sergino Dest… (Sidee wax u jiraan?)
Ole Gunnar Solskjaer oo la siiyey saddex kulan oo uu ku badbaadsado shaqadiisa Kooxda Manchester United
Manchester United oo liiska xiddigaha ay suuqa ka doonayso ku darsatay laacib ka tirsan Kooxda Wolves
Haaruun April 12, 2021
(Manchester) 12 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay liiska xiddigaha ay suuqa ka doonayso ku darsatay ciyaaryahan ka tirsan naadiga Wolves.
Shabakadda ciyaaraha ee 90min ayaa warinaysa in Man Utd ay idnaha ku hayso inay xagaagan la soo saxiixato ciyaaryahanka Kooxda Wolves ee Ruben Neves, kaddib markii Solskjaer uu bartilmaameed ka dhigtay xiddigan.
Kooxda ka arrimisa garoonka Molineux ayaa ku faraxsan inay iibiso laacibkan kaddib afar sano oo uu joogay Naadiga, iyadoo kooxaha sida Manchester City iyo Liverpool ay xiiseynayeen intii lagu guda jiray waqtigaas.
Red Devils ayaa haysata meel kale oo ay u baahan tahay inay shaxdeeda ka xoojiso, waxaana ka mid ah daafaca iyo weerarka, laakiin fursad walba oo ay ku soo qaadan karto Neves waa mid ay doonayaan madaxda Kooxda.
Neves ayaa si weyn looga tixgaliyaa garoonka Old Trafford halka wakiilkiisa Jorge Mendes, uu aad ugu dhow yahay oo uu la shaqeysto Maamulka Man United.
Kooxda Paris Saint-Germain oo wadahadallo la furtay Mohamed Salah... (Halkuu ku dambeeyaa damacii Real Madrid?)
Waa tee Kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ee hoggaanka u haysa tartanka loogu jiro saxiixa Sergio Kun Aguero?